Hiil Qaran - Kullan Dhexmaray Guddoomiyaha ISlaax iyo Madax Xisbiga Hiilqaran
08December2013	Hiil Qaran
Tuesday, 12 June 2012 06:25	Kullan Dhexmaray Guddoomiyaha ISlaax iyo Madax Xisbiga Hiilqaran
Waxaa beryahanba dalka holland booqasho ku joogay dr. Ali Baashe oo ah Guddoomiyahadhaqdhaqaaqa al Islaax. Al islaax oo ah urur ka mid ururada si weyn uga qaybqaatay ka shaqayntaadeegyada muhiimka ah oo bulshada Soomaaliyeed ka maqnaa, la'aanta dawladdii dhexe ooSoomaaliya darteed.
Guddoomiyuhu intii uu joogay dalka Holland wuxuu wadahadallo ku saabsan maxladda uu dalkumarayo la yeeshay qaar ka mid bulshada rayidka ah ee ku nool wadankan Holland.Tusaale ahaan wuxuu Dr. Ali Baashe kulan la qaatay madax sare ee Xisbiga Hiilqaran,. Waxa kulan
kaas la isku weydaarsadey warbixinno ku saabsan xaaladda wadanku uu ku suganyahay maanta.Waxay labada dhinacba isku aragti ka ahaayeen in ka bixitaanka xilligaani uu u baahan dadaal badaniyo wada shaqayn dheeraada oo dhexmarta ururada bulshada rayidka. Waxaa wada haddalkaas dhinaca Hiilqaran guddoomiyaha la qaatay, avv. Musse Ahmed Hersi, oo ahxubin ka mid golaha dhexe een Hiilqaran, iyo madaxa qaybta Hiilqaran Holland dr.Ali Abdi Waare.Waxay madaxda Hiilqaran guddoomiyaha iyo ururkiisa uga mahadceliyeen kaalinta uu ka qaatayhorumarinta bulshada ilaa intii wadanku uu burbursanaa. Gaar ahaan dhinaca waxbarashad Sare.Ururka Hiilqaran oo ay ka mid yihiin dad badan oo aqoon yahan ah, ayaa waxay weligoodbataageersanayaan dadaalka ay ay al islaax iyo hayadaha kaleba oo la mid ahi ay ka wadeen dalka.Mawduucyada laga wada hadlay ee labaduba ay danaynayaan xilligan waa in la helo cod midaysanoo ka jawaabaya duruufaha adag oo maanta ay sugantahay ummadda Soomaaliyeed. Iyo inay kashaqeeyeen iyaga iyo cidii kale oo ay kaashankaraanba gaaritaanka bulsho Soomaaliyeed oo nabad kuwadanool kana shaqaysa horumarka iyo wannaaga ummaddooda dhinac kasta.Waxay masuuliyiintu ballanqaadaan in ay gollayaashooda iyo maamuladooda la wadaagi doonaansidii loo dardar gelin lahaa hergelinta ujeedada aan soo sheegnay. Taasoo ah in la helo qaab iskaashioo si run ah u xaqiijinaya ujeedadaas.	Read 1394 times	Tweet